Ukucacisa i-Lightning Network sisebenzisa isiBali | Exonumia
# Ukucacisa i-Lightning Network sisebenzisa isiBali
NguRoy Sheinfeld 2018/03/25open in new window
Abantu abaninzi bayithandile into ebendiyibhale kwinqaku elingaphambili elinesihloko esithi: Lighting Network is the Future of Bitcoinopen in new window. Kodwa ngethuba ndifunda izimvo zabanye abantu, ndiye ndacacelwa ukuba abanye abantu abayazi kakuhle eyona ndlela isebenza ngayo i-Lightning Network. Kweli nqaku, ndiza kunika ingcaciso etyebileyo malunga ne-LN kunye namajelo ayo asetyenziswayo okuhlawula ndisebenzisa umzekelo wesibali (i-abacus), ndingakhange ndinike ubucukubhede obuntsokothileyo malunga nendlela esetyenziswa ngayo i-LN.
Ke ngoku, ijelo lokuhlawula le-LNopen in new window khawulifanise necingo elinye lesibali, apho amaso eza kumela ii-bitcoins ezingaphakathi kwijelo lokuhlawula. Ngethuba u-Alice noBob beyila ijelo lokuhlawulana, u-Alice ebebhatala ii-bitcoins kwi-Blockchain phakathi kweli jelo. Okwangoku, ezi bitcoins (umz., ii-bitcoins eziyi-10 okanye 0.00001 BTC) zezika-Alice. Kulo mzekelo, intloko nganye ilingane ne-bitcoin enye:
Ucingo lesibali kunye nejelo lokuhlawula zineempawu ezifanayo:
Ziya macala onke: njengoko amaso akwicingo lesibali enokuhanjiswa asuke ekhohlo aye ekunene, nangasekunene aye ekhohlo, ii-bitcoins zingathathwa ku-Alice ziye kuBob, nakuBob ngokunjalo.
Ubunini: kwisibali, amaso abangasekhohlo okanye abengasekunene, awafani eme ecingweni phakathi. Kuyafana ke nakwii-bitcoins kwijelo lokuhlawula ingazezika-Alice okanye zibe zezikaBob.
Azitshintshi: njengoko namaso engenokongezwa okanye akhutshwe ecingweni lesibali, u-Alice noBob banganikana ii-bitcoins bona, kodwa zingadluli kwela nani belibekwe ekuqaleni ngethuba kuvulwa ijelo lokuhlawula. Ukuba bafuna ukunikana ii-bitcoins ezininzi kakhulu, kufuneka bavule enye i-akhawunti yokuhlawulana.
I-akhawunti yokuhlawula ijongeka ngolu hlobo emva kokuba u-Alice ethumele i-bitcoin ezimbini ku-Bob:
Ngoku u-Alice unamaso asi-8 aze uBob yena abe nama-2. Masithi ke ngoku u-Bob naye uku-LN njengo-Carol apho asebenzisa ijelo lokuhlawula elinee-bitcoins ezili-10:
Nge-LN, u-Alice angabhatala uCarol esebenzisa u-Bob. Kulo mzekelo wesibali, ukuba u-Alice ufuna ukuthumela ii-bitcoins ezimbini kuCarol, ususa amaso ama-2 kweli cingo lesibali linaye noBob awase ngasekunene (ngakuBob) aze yena uBob aqhube amaso ama-2 aye kweli cingo lesibali linaye noCarol ngasekunene (aye kuCarol). Iza kubonakala ngolu hlobo emva kokuba u-Alice ethumele u-Carol ii-bitcoins ezi-2.
Kubalulekulekile ukuba sikhankanye ukuba u-Bob ebevumile ukuba kuhlawulwane, akanakuwathatha amaso ka-Alice engakhange naye akhuphe alinganayo nala awafumeneyo awathumele kuCarol.
Sisebenzisa lo mzekelo wesibali, kulula ukucacisa indlela esetyenziswa ngayo i-LN xa kusenziwa iintlawulo ezingeyonxalenye ye-blockchain, ingakumbi izinto ezifunekayo ekufuneka ijelo lokuhlawula linazo ukuze likwazi ukwenza iintlawulo. Umzekelo, kulula ukubona indlela ekulula ngayo ku-Alice ukuba athumelele uCarol amaso amaninzi ngaphezulu kula uBob anokukwazi ukuwagqithisa. Kodwa mhlawumbi kwixa elizayo uza kukwazi ukwenza oku esebenzisa ii-AMPopen in new window, kodwa lo ngumba ofuna ixesha lawo wodwa lowo…
Ukuba eli nqaku libe lincedo kuwe, ungalibali ukufaka imifanekiswana yokuqhwaba izandla (xa ufuna izandla ezininzi eziqhwabayo, cofa umzuzwana ungayeki) uyithumele.